१ करोडको ‘हार्ले’ मा हेल्मेट नलगाई हुइँकिन्छन् पूर्वयुवराज पारस – Dailny NpNews
बिहिबार ०७ आश्विन २०७८
अब काठमाडौं उपत्यकामा ९९ रुपैयाँमै ट्याक्सी चढ्न पाइने
एक सुरमा रमाउँदै दौडिरहेको बालकलाई अजयले कराएर ‘पख भाइ पख भन्दाभन्दै ऊ ढलमा ख स्यो ‘
तीन दिन हिडेर चामल किन्न डिपो पुगिन् जुनकला, नपाएपछि आँसु झार्दै फर्किइन् घर !
कर्म सहि गर, फल प्राप्त हुन्छ : राजेश हमाल
१ करोडको ‘हार्ले’ मा हेल्मेट नलगाई हुइँकिन्छन् पूर्वयुवराज पारस
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १८, २०७८ समय: १८:४५:०१
पूर्वयुवराज पारस शाह सार्वजनिक स्थानमा गर्ने व्यवहारको कारण बारम्बार विवादमा आउने गरेका छन्। शुक्रबार राति काठमाडौंको महाराजगञ्जमा मोटरसाइकल कुदाइरहेका शाहलाई ट्राफिक प्रहरीले रोक्यो। मुख्य कारण उनले मोटरसाइकल कुदाउँदा हेलमेट लगाएका थिएनन्। ट्राफिक प्रहरीले हेलमेटविनै मोटरसाइकल चलाएको भन्दै बाइकबाट उत्रिन आग्रह गरेपछि शाह प्रहरीसँगै बाझ्न थाले। पछि उनका सहयोगीले हेलमेट ल्याएपछि उनी त्यहाँबाट छुटे।
उक्त घटनापछि पारसले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै हार्ले बाइक चलाउँदा अमेरिकामा पनि कसैले हेलमेट नलगाउने दाबी गरेका थिए। उनले हार्ले चढ्नेले हेलमेट नलगाउने बताए पनि जुन देशमा हेलमेट अनिवार्य छ, त्यहाँ लगाउने गरिएकै छ। हेलमेट नलगाएको विषयमा ट्राफिक प्रहरीसँग विवादपछि पारस चढ्ने मोटरसाइकलको चर्चा बढेको छ। पारस संसारकै महंगोमध्ये पर्ने हार्ले डेभिड्सन कम्पनीको मोटरसाइकल चढ्छन्। हार्ले डेभिड्सन अमेरिकाको आइकोनिक मोटरसाइकल ब्रान्ड हो । यसको स्थापना सन् १९०३ मा भएको थियो ।
हार्ले मोटरसाइकल सबैभन्दा बढी अमेरिका र युरोपमा बिक्री हुँदै आएको छ। सन् २०२० मा विश्वभर १ लाख ८० हजार हार्ले मोटरसाइकल बिक्री भएको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी बाइक चालकहरुले लामो दूरीको यात्राको लागि हार्ले डेभिडसन बाइकको प्रयोग गर्ने गर्दछन्।
हार्लेका मोटरसाइकल कम्तीमा २० लाखदेखि १ करोड बढीसम्मका हुन्छन्। नेपाली सडकमा पनि सस्ता र महंगा दुवै मोटरसाइकल गुडिरहेका छन्। आईएमई ग्रुपअन्तर्गतको आईएमई अटोमोटिभ्सले सन् २०१८ को नाडा अटो शोमार्फत नेपालमा पहिलोपटक हार्ले डेभिडसनका बाइक औपचारिक रुपमा भित्र्याएको थियो ।
पारस चढ्ने मोटरसाइकलको मूल्य १ करोड
पूर्वयुवराज शाह चढ्ने मोटरसाइकल हार्ले डेभिड्सनको सफटेल हेरिटेज १९९५ मोडल हो। उक्त मोडलको मूल्य करिब १ करोड छ। ‘ पारस शाह चढ्ने हार्ले डेभिड्सनको सफटेल हेरिटेज १९९५ मोडल हो,’ आईएमई अटोमोटिभ्सका एक जना पूर्वकर्मचारीले नेपालखबरसँग भने ‘त्यसको मूल्य ९० देखि १ करोडसम्म पर्छ।’
कम्पनीले उक्त मोडलका बाइक नेपालमा बिक्री नगरेकाले ठ्याक्कै मूल्य भन्न नसकिने उनले बताए। उनले पारस शाहले हार्ले बाइक गुडाउँदा हेलमेट नलगाउने भन्ने विषय गलत भएको बताए। ‘कसले कुन बाइक चलाउँछ भन्ने होइन। हेलमेट आफ्नो सुरक्षाको लागि लगाउने हो। सबै बाइक चलाउनेले लगाउनुपर्छ’, उनले भने।
हार्लेको नेपालमा के छ अवस्था ?
चर्चित अमेरिकी बाइक ब्रान्ड हार्ले डेभिडसन सन् २०१८ को नोभेम्बरदेखि नेपालमा नै आधिकारिक कार्यालय स्थापना गरी आईएमई अटोमोटिभ्सले बाइक बिक्री तथा पार्टपुर्जा समेत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। नेपालमा काठमाडौंस्थित गैह्रीधारामा कार्यालय खोलेर यस कम्पनीले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी हार्ले डेभिडसन बाइकको सर्भिसिङ सेवा सुरु गर्यो। प्रिमियम ब्रान्डमा परिचित अमेरिकन बाइक हार्ले डेभिडसन बाइकको सर्भिसिङ, सबै प्रकारका पार्टपुर्जा तथा सुरक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री समेत उपलब्ध गराएको थियो।
नेपालमा अधिकांश बाइक तथा गाडीहरु भारत हुँदै आउने गरे पनि हार्ले डेभिडसन भने सुरुमा ल्याएका मोडल सिंगापुरबाट आए। कम्पनीले नेपालमा पहिलोपटक हार्ले डेभिडसन आइरन ८८३ मोडलको ८८३ सीसीको बाइक बाइक नेपाल भित्र्याएको थियो। जसको मूल्य ४५ लाख ८५ हजार पर्दछ। कम्पनीले आइरन ८८३ केही मोडल बिक्री गरेको छ।
कम्पनीको शोरुममा नभएको हार्ले फ्याट ब्वाय मोडलको बाइक नेपाल भित्र्याई बिक्री समेत गरेको छ। आईएमई अटोमेटिभ्सले फ्याट ब्वाय ८५ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको हो। महंगो बाइक बिक्री नभएपछि इन्ट्री लेबलका मोटरसाइकल भित्र्यायो। जसमध्ये स्ट्रिट ७५० मोडल र स्ट्रिट रड ७५० मोडलको भित्र्याए।
कम्पनीले स्ट्रिटको मूल्य २३ लाख र स्ट्रिट रड ७५० को मूल्य २७ लाख रुपैयाँ राखेको थियो। विश्वको चर्चित ब्रान्ड हार्ले डेभिडसन लामो समय नेपालमा टिक्न सकेन। आईएमई अटोमोटिभ्सले गत वर्ष कोरोना महामारीमा खर्च बढेको भन्दै गैह्रीधारामा खोलेको शोरुम नै बन्द गरेको छ।
कम्पनीले अब बुकिङपछि मात्रै बाईक भित्र्याउने जानकारी दिएको छ। नेपालबाट बाहिरिनु केही समयअघि हार्ले भारतबाट समेत बाहिरिएको थियो। कम्पनीले बढी कर लगाउँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै भारतको बिक्री सञ्जाल र सर्भिसको जिम्मा हिरो मोटोकर्पलाई सुम्पिएर हार्ले बाहिरिएको थियो। -नेपाल खबरबाट
समुद्रको किनारमा अनौठो चीज भेटेपछि आमा छोरीले जब घरमा ल्याए त्यसपछि जे भयो …
ट्याटु बनाएका ११ नेपाली नायिका, हेर्नुस् कस्ले कस्तो ट्याटु बनाएका छन् ।